Muxuu Baybalka ka dhahay guurka isdhaxgalka qowmiyada?
Su’aal: Muxuu Baybalka ka dhahay guurka isdhaxgalka qowmiyada?
Jawaab: Sharciga Baybalka Hore wuxuu ku amray Yahuuda inaysan ka qeybgalin guurka isdhaxgalka qowmiyada (Sharciga Kunoqoshadiisa 7:3–4). Si kastaba, sababta amarkaan muusan aheyn midibka maqaarka qowmiyada. Badelkii, uu ahaa diimeed. Sababta Illaah u amray guurka isdhaxgalka qowmiyada ee Yahuuda waxay mida dadka qowmiyadaha kale ay ahaayeen caabudayaasha illaahyada beenta ah. Yahuuda wuxuu u hogaaminayaa baadi ee Illaah haddii ay guursdaan caabudayaasha sannamka, beeganka, ama diin la’aanta. Tani dhabtii waa waxa ku dhacay Israa’iil, sida waafaqsan Malaakii 2:11.
Mabaa’di’da la midka ah daahirnimada waxaa laga saaray Baybalka Cusub, laakin ma jiraan wax ay ku lugleedahay jinsiyada: “Ha wada gelin kuwa aan aaminsaneyn. Waxa kuwa saxan iyo xun ay qabaan guud ahaan? Ama waxa raacinimada ay iftiimin karaan ama mugdiyeyn karaa?” (2 Korintos 6:14). Sida Israa’iisha (aaminyaasha halka Illaah ee dhabta ah) waxaa lagu amray inaysan guursan sannam caabudayaasha, marka Kirishtaanka (aaminyaasha ee halka Illaah ee dhabta ah) waxaa lagu amray inaysan guursan kuwa aanan aaminsaneyn. Baybalka marnaba ma dhihin in guurka isdhaxgalka qowmiyada uU qaldanyahay. Qof walba ee mamnuuco guurka isdhaxgalka qowmiyada iyada oo aan jirin maamulka baybalka.
Sida Martin Luther King, Jr., wuxuu qoray, qof waa in lagu xukumaa sifadiisa ama sifadeeda, ma ahan midibka maqaarkiisa. Ma jiraan meel ku jirto nolosha Kirishtaanka ee eexashada ku saleysan jinsiyada (Yacquub 2:1–10). Xaqiiqda, aragtida baybalka waa mida kaliya hal “qowmiyada”—qowmiyada aadanaha, iyo qof walba oo ka soo jeedo Adam iyo Eve. Marka aad dooraneysid saaxib, Kirishtaanka waa inuu marka koowaad ogaadaa haddii xaaska imaan karo markale ayuu ku dhashay aaminaada Ciise Masiixi (Yooxanaa 3:3–5). Aaminaada CiIse, ma ahan midIBKA maqaarka, waa heerka baybalka ee doorashada xaaska. Guurka isdhaxgalka qowmiyada ma ahan xaalada saxnaanta ama qaldanaanta laakin xikmada, wax garashada, iyo tukushada.
Lamaanaha tixgelinayo baahiyada lagu miisaaminayo xaqiiqo badan. Iyada oo ku kala duwan maqaarka waa inaanan la iska dhaga tirin, igabi ahaanba waa inaysan noqon xaqiiqda go’aansiga ee haddii lamaanaha ah inay is guursadaan. Lamaanaha isdhaxgalka qowmiyada waxay wajihi karaan takoorid iyo jeesjeeska, oo waa inay u diyaar garoobaan inay ka jawaabaan naceybka qaab baybalka. “Ma jiraan kala duwanaansho u dhaxeeyo Yahuuda iyo Dadka aanan yahuuda aheyn—isla Illaaha waa Illaaha ee dhammaan iyo qanimo u u qeyreeyo cida weydiisato” (Rooma 10:12). Kaniisada midibka camoolaha ah iyo/ama guurka isdhaxgalka Kirishtaanka waxay noqon kartaa sawirida tayadeena ee Kirishtaanka.